Articles tagged 'zimbabwe music rights association'
Artises call for political intervention 27 April 2018 HARARE - Zimbabwe Music Rights Association (Zimura) executive director Polisile Ncube-Chimhini says artistes will never win the war against piracy without political will. She said this yesterday in Harare as the country joined the rest of the world in commemorating the World Intellectual Prope...
'ZBC prejudicing composers' 15 June 2016 HARARE - Zimbabwe Music Rights Association (Zimura) says Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) is prejudicing their members in terms of music royalties because of their manual log-in system. When a broadcaster plays music, they are supposed to log in the song, internationally it is done thro...
Zimura fails to pay international artistes 1 July 2014 HARARE - The Zimbabwe Music Rights Association (Zimura) said they owe international as well as regional artistes royalties. William Nanaire, the society’s financial officer, said they collect cash for all artistes but have their priorities set on local artistes. “We owe international artist...
Zimura tackles diminishing returns 3 February 2014 HARARE - Zimbabwe Music Rights Association (Zimura) director Polisile Ncube says her organisation is generating less revenue due to widespread closure of businesses that pay for using music. The music rights body generates royalties for member musicians by licensing radio stations and other en...
Zimura engages ministry over ZBC debt 30 December 2013 HARARE - Zimbabwe Music Rights Association (Zimura) and the Media, Information and Broadcasting Services ministry are locked up in talks over $600 000 that the Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) owes musicians. Zimura director Polisile Ncube told the Daily News this week that talks betwee...
Zimura elects new board 6 December 2013 HARARE - Gospel star Charles Charamba and poet-cum-musician Albert Nyathi have been included in a new seven-member Zimbabwe Music Rights Association (Zimura) board voted into office on Tuesday. The two popular artistes will be joined by Joyce Simeti, Bob Nyabinde, First Farai, Metro Studios pr...
Tackle the piracy scourge 5 December 2013 HARARE - The election of a new seven-member board to take charge of the affairs of the Zimbabwe Music Rights Association (Zimura) presents yet another opportunity for Zimbabwean musicians to consolidate efforts to accrue more out of their artistic compositions. With piracy exploding out of con...
ZiFM, Zimura in payment deal 3 December 2013 HARARE - Zimbabwe Music Rights Association (Zimura) has finally managed to reach an agreement with local commercial station ZiFM following the signing of a contract on November 22. Zimura director Polisile Ncube said as an organisation they were pleased with the outcome. “We signed the cont...
Zimura to embark on anti-piracy blitz 23 October 2013 BULAWAYO - Zimbabwe Music Rights Association (Zimura) says musicians will mount a blitz against music pirates from next month until the end of the year. Clarence Garura, Zimura branch manager for Bulawayo told the Daily News the planned blitz is intended to reenergise the anti-piracy drive th...
ZBC defaults on music royalties 2 August 2013 HARARE - Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) is failing to meet contractual obligations it entered into with the Zimbabwe Music Rights Association (Zimura) to clear over $600 000 in music royalties the national broadcaster owes musicians. After the High Court authorised the deputy sheriff ...